Ọdọ Kawaguchiko, na ụkwụ Ugwu Fuji na nso Tokyo | Akụkọ Njem
Ọdọ mmiri Kawaguchiko, na ụkwụ Ugwu Fuji na Tokyo nso
Japan bụ mba a na-apụghị ịhụ n'otu njem. Enwere ọtụtụ "Japan" ka ị na-ejegharị. Agwaetiti ọ bụla nke mejupụtara mba a pụrụ iche ma dabere na oge nke afọ ị gara, ị ga-ahụ ocher na agba ọla edo, nnukwu ahịhịa, snow na-acha ọcha, turquoise ...
Otu n'ime akara Japan bụ Fujisan ma ọ bụ Ugwu Fuji na enweghị mgbagha ọ bụ ebe njedebe na-aghaghị ịmara. Rịgo ya bụ ihe ọzọ, maka ndị njem ma ọ bụ ugwu ugwu, mana ịga ụkwụ ya, na-ahụ ya, na-atụ anya, bụ ihe anyị ga-eme ma ọ bụrụ na anyị aga mba anwụ na-awa. Na ezigbo ebe bụ Ọdọ Mmiri Kawaguchiko.
1 Ọdọ mmiri 5 nke Fuji
2 Uzo esi aga na mmiri Kawaguchiko
3 Ihe ị ga-ahụ n’Ọdọ Mmiri Kawaguchiko
Ọdọ mmiri 5 nke Fuji
Nke a bụ a ebe nwere ọdọ mmiri ugwu ise na ihe kacha enweta site na Tokyo na maka ọrụ ndị njem nleta na akụrụngwa ọ nwere bụ Ọdọ Mmiri Kawaguchiko. A njem ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ ala bụ iji ugwu ugwu, a kwes spa, na mgbakwunye, na ị ga-uru nke.
A na-atụ aro ahụmahụ nke onsen mgbe mmadụ na-aga Japan ma ọ nweghị ihe dị mma karịa ime ya ebe a, ugwu na oke ọhịa gbara ya gburugburu. Echiche kachasị mma nke Fujisan, dị ka ha kpọrọ ya, si n'akụkụ ugwu nke ugwu ma ọ bụghị ebe ahụ ka ụlọ nkwari akụ, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na ụlọ ahịa dị iche iche kama n'akụkụ ọwụwa anyanwụ. Osimiri ndị ọzọ dị mma ịga ije ntakịrị ma hụ nnukwu ugwu ahụ, ọ bụrụhaala na igwe ojii anaghị ekpuchi elu ya.
Ọdọ mmiri ọ bụ ọdọ mmiri nke abụọ kacha ukwuu n’ime ọdọ mmiri ise dị n’ógbè ahụ ma bụrụ nke kasị ala, ọ bụ nanị mita 800 n’elu ọ̀tụ̀tụ̀ mmiri. Ọ bụ ya mere ọ bụ ezigbo ebe njedebe oge ọkọchị dakwasịrị Tokyo ebe ọ bụ na ọnọdụ okpomọkụ ebe a na-adịkarị mma. N'ezie, n'oge oyi, ị ga-agbakọta.
O doro anya ọ bụ ọdọ mmiri kacha ewu ewu na nke nwere ulo oru nlegharị anya etolitere etolite. Nwere ike ịdabere ebe a ma debanye aha maka ịgagharị gburugburu iji nwee kaadi akwụkwọ ozi zuru oke.
Uzo esi aga na mmiri Kawaguchiko
Iji rute mpaghara a site na Tokyo ị nwere ike ịnara ụgbọ ala ma ọ bụ gaa ụgbọ oloko na ikpokọtar. Gbọ oloko na-amasị m na ihe ndị ọzọ mgbe ị na-akwụ ụgwọ Ragbọ okporo ígwè Japan. Ikwesiri iji JR Chuo Line si Shinjuku Station gaa Otsuki Station. Ọ bụrụ n’ịnwere ụgbọ oloko mpaghara ọ na-ewe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa abụọ, ọ bụrụ na ị were nanị awara awara awara awa 70. Site na Otsuki ị ga-esi Fujikyu Railway gaa Ọdụ Kawaguchiko. Njem a were ihe dị ka awa.
You nwere ike iji JRP jikọta Shinjuku na Otsuki ihe ọ bụla. Ntughari nke kpuchiri mbufe a bu JR Tokyo Wide Gafere. Thegbọ ala na-amasị gị? Mgbe ahụ ị nwere ike were otu na Shin juku, ha na-ahapụ abụọ kwa elekere ma ọ na-ewe awa abụọ na ọnụahịa nke 1750 yen. Ndị ọrụ Fujikyu na Keio na-arụ ọrụ ha. Site na Tokyo Fujikyu na JR Kanto Bus nwekwara ọrụ abụọ kwa elekere na otu ego.
Otu nhọrọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgafe, bụ Fuji Hakone Pass nke bụ maka ndị ala ọzọ: ọ na-enye ohere iji ụgbọ ala, ụgbọ oloko, ụgbọ mmiri, eriri USB na funiculars na-akparaghị ókè na mpaghara Hakone na Osimiri Ise nke Fuji. Ọ na-ewe ụbọchị atọ na-esote ma na-agụnye tiketi Tokyo-Hakone na ụgbọ oloko Odakyu na tiketi otu ụzọ naanị n'etiti Tokyo na Osimiri Ise.
Na Shinjuku ọ na-efu 8000 yen (ihe dị ka $ 80), yana site na Odawara ọ dị ọnụ ala, yen 5650. O zuru ezu zuru ezu, ma ọ bụrụ na ị ga-akwagharị ọtụtụ.
Mpaghara Fujisan nwere ọdụ ụgbọ elu abụọ: Fujisan na Kawaguchiko, na bọs na-ahapụ ma nke na-enye ohere ị ga mpaghara ahụ dum. Enwere ezigbo nkọwa: e nwere ochie ụgbọ ala ndị pụrụ iche maka ndị njem nleta. Usoro Kawaguchiko nke na-aga n'akụkụ ọwụwa anyanwụ na ebe ugwu na Saiko nke na-aga n'ụsọ oké osimiri ndịda wee rute n'Ọdọ Mmiri Saiko. Nwere ike ịzụta ngafe na-akparaghị ókè maka ahịrị abụọ nke ga-anọ awa 48 ma na-efu 1200 yen.
O doro anya ụgbọ ala mgbe niile na-agba ọsọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iru ọdọ mmiri ndị dịpụrụ adịpụ ị ga-ewere ha. N’ikpeazụ, ọ bụrụ n ’ịnwa ịkwọ ụgbọala n’akụkụ nke ọzọ, ị nwere ike gbazite ụgbọ ala na daalụ chukwu ị nwere ike oge niile gbazite igwe kwụ otu ebe.
Ihe ị ga-ahụ n’Ọdọ Mmiri Kawaguchiko
E wezụga nke fujisan Ọ bụrụ na anyị nwere ihu ọma? Ọ dị mma ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ụgbọ mmiri na ọdọ mmiri, baths bath na a mma ịrị ugwu site funicular. Na Kachi Kachi funicular rịgoro na elu ugwu Tenjo ị nwere ike ịhụ ọdọ na Fujisan. Ọ bụrụ na ị si ebe a mee njem njem ị nwere ike ịga ije Ugwu Mitsutoge, ihe bụ ihe ọzọ. Ọ na-efu 800 yen gburugburu.
E nwere ọtụtụ na Ebe a. Ndụmọdụ m bụ na ọ bụrụ na ịnwere ike ịnọ na ryokan (ebe obibi ndị Japan nke ọdịnala), nke nwere nke ya, mana ọ bụrụ na ịnweghị ike mgbe ahụ ị nwere ike ịnụ ụtọ ịsa ahụ ọkụ na ọha na eze ma ọ bụ ụlọ nkwari akụ nke meghere nke ya. Otu n'ime nke ikpeazụ bụ Royal Hotel Kawaguchiko, nke dị n'ụsọ oké osimiri ndịda, ọ bụ ezie na ọ nweghị echiche nke ugwu ahụ. Ọzọ bụ Mifujien Hotel, nke dị n'akụkụ ugwu ọwụwa anyanwụ. Ime ụlọ ime ụlọ ya kewara site na okike mana o nwere echiche nke Fujisan.
N'èzí hotels bụ Tensui Kawaguchiko, onye ọha na eze nọ n'etiti oke ọhịa, na nso Kubota Itchiku Museum. O nwere ọdọ mmiri ọdọ mmiri dị n'èzí atọ, ime ụlọ ịsa ahụ na sauna maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke. N'ezie, ọ dịghị ihe Fujisan n'etiti osisi. Choo mpempe akwụkwọ nwere mmiri oku, nwa gi nwoke na nwa agbogho ozo gi na Fujisan di n’ihu aghaghi ile anya. Nkewa nke nwoke na nwanyị nke ime ụlọ ịwụ bụ nsogbu, ọ bụ ya mere m ji gwa gị na ị ga-anọ na ryokan nwere nke ya.
N'ikpeazụ, na ụzọ ụgbọ ala uhie dị obodo mmiri na-ekpo ọkụ abụọ, Funatsu-Hama na Azagawa. Onye ọ bụla nwere hotels na ọha na eze onsen na ị pụrụ ịnụ ụtọ. N’ikwu okwu banyere ebe ngosi ihe mgbe ochie, Kubota Itchiku mara ezigbo mma yana kwa gburugburu ya na ubi, oke ohia na mmiri iyi. Itchiku Kubota bụ ọkachamara na akwa akwa akwa akwa na ngosipụta ahụ mara mma.
E nwekwara ebe a na-a teaụ tii n'ime ihe ngosi nka, nke nwere echiche banyere Ugwu Fuji. Ọ bụrụ n ’ịga n’oge mgbụsị akwụkwọ, mpaghara ahụ na-abụ ocher, uhie na ọla edo oasis ma ọ bụrụ n’aga n’agbata Eprel na ngwụcha Mee, ị ga-ahụ okooko osisi niile mara mma na mpaghara ubi nke lavender na blueberries.
Dị ka ị hụrụ Ọdọ mmiri Kawaguchiko kwesịrị ileta ma ọ bụrụ na ịnọ na Tokyo. Threebọchị atọ zuru ezu iji zoo ala ugwu ugwu ma onye maara, ọ bụrụ na a hụ Fujisan ị ga-enwe nnukwu ncheta ahụ ruo mgbe ebighị ebi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Tokio » Ọdọ mmiri Kawaguchiko, na ụkwụ Ugwu Fuji na Tokyo nso
4 dị iche iche Ime Anwansi obodo nke Mexico na-achọpụta